नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् – Online Nepal
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन्
May 30, 2020 35905
शुष्माका बुवाले यो भन्दा पहिले पनि पटकपटक आएको र प्रहरीकहाँ बुझाएको कुरा स्विकार गरेका छन् । उनले शंका गर्दै भने, ‘रातको बीचमा आउँथे भने सायद हामीलाई मा रेर भाग्थे होला ।’ उनले केटाहरु ६ बजे आसपास गाउँमा आएको बताएका छन् । उनले अर्को के कुरा बताए भने लकडाउनका कारण गाउँमा नयाँ मान्छे आउँन नदिने भन्दै गाउँलेहरुले लखेटेको जानकारी दिएका छन् । तर आफुसँगै नगएको पनि खुलासा गरेका छन् । उनले कुराकानी गर्ने क्रममा एकजना छोरालाई गतवर्ष ट्याक्टरको ठक्करबाट गुमाउनु परेको दुःखेसो गरेका छन् । उनीसँग अहिले २ जना छोराहरु रहेका छन भने छोरी शुष्मा मात्रै हुन् ।
तर नवराजको परिवार यी सबै कुरा मान्न तयार छैन । मृतक नवराजकी आमा उर्मिलाका अनुसार उनको छोरा र शुष्माबीच लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । आमा उर्मिलाले युवतीको पेटमा आफ्नो छोराको बच्चा रहेको दावी गरेकी छन् । उनले छोरा र ति युवतीको कुरा फोनमा भएको सुनेको र त्यतीवेला युवतीले मेरो पेटमा बच्चा छ, आमा बुवाले अन्तै विवाह गरिदिन लागे लिन आउ भनेर भनेको सुनेको उनको दावी छ । उनले ति युवतीको पेटमा साँच्चै बच्चा छ भने त्यो आफुलाई चाहिने बताइन् ।
Prevलकडाउन एकैपटक यति धेरै लम्ब्याउँने तर यस्तो मोडलमा खुकुलो बनाउँने
Nextनेपालबारे जथाभावी नबोल्न भारतीय मिडियालाई मोदीको निर्देशन
रोकिनुहोस् ! किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? भाटभटेनीमा यसरी फैलियो कोरोना [भिडियोसहित]
अभिनेत्री श्वेता खड्काले धनगढीका युवकसँग यही २२ मंसीरमा बिहे गर्दै